| Haqabtire News
April 27, 2016 - Written by admin
Weeraryahanka kooxda BAYERN MUNICH ee Robert Lewandowski ayaa soo jeediyay indhaha kooxda Premier League ee Arsenal kadib markii uu sheegay inuu jeclaan laha inuu raaco talaabooyinkii halyeeygiisa Their Henry oo hore u soo hogaamiyay Arsenal.
Weeraryahanka heerka caalami ee Polish ka ah ayaa hore loola xiriirnayay inuu ku biiro Arsenal markii uu ahaa ciyaariyahan xor ah laakin Gunners ayaa u muuqda kuwo markale heli kara fursad ay kula soo wareegaan xidigaa kaasoo ka hor kuloanka caawa ee Bayern saxaafada u sheegay “Malaha waxaan mar uun ka ciyaari doonaa England ama Spain “.
“Laakin hadii aan lasii joogo Bayern waxay la macno tahay inaan doortay kooxdii igu habooneyd, iyo halka aan koobab badan kula guuleysan karo”.
Isagoo ka hadlayay mustaqbalkiisa wuxuu yiri “Ma aqaano waxa dhici doono mustaqbalka, waqti xaadirkaan waxaan aad ugu faraxsanahay Bayern laakin Thierry Henry ayaa waligey ahaa halyeeyga waxana jeclahay inaan qaado dariiqii uu isaga qaaday, waxana si gaar ah u daawan jiray isaga markuu u ciyaaryay Arsenal”.
Warkaan ayaa ah mid u roon dhagaha jamaahiirta kooxda Arsenal iyo waliba maclain Wenger oo xidigaan kala hadli kara imaatinkiisa kooxda Gunnes xagaagan.